खेलाडीले सोचको एउटा, पाए अर्को – भारत भ्रमण बिशेष - Nepal Cricket
खेलाडीले सोचको एउटा, पाए अर्को – भारत भ्रमण बिशेष
केन्या विरुद्धको खेलका लागि एक साता भारत भ्रमणमा रहेको नेपाली टिमले सोचेको जस्तो अभ्यास खेल खेल्न नपाएर नै नेपाल फर्कने भएको छ । नेपालबाट जानुअघि अफगानिस्तानको ए टिम, इयर इन्डिया र राजस्थानको टिमसंग खेल्ने बताइएको थियो । तर नोयडा पुगेपछि नेपाली टिमले सामान्य क्लव टिमसंग खेलेर नेपाल फर्किने भएको हो ।
आइतबार नेपाली टोलीले नोयडास्थित राजवाडा क्रिकेट टिमसँग खेल्यो । त्यसको खबर टस हुनु केहीअघि मात्रै आम नेपाली क्रिकेट समर्थकलाई थाहा भयो । त्यस्तै, मंगलबार पनि सोही क्लबसग अर्को अभ्यास खेल खेल्यो । जसमा नेपाल जित्न त सफल भयो तर नेपाली खेलाडीले आफनो भन्दा तल्लो स्तरको टिमसंग अभ्यास खेल्नुपरयो । त्यसपछि पनि आज भएको अन्तिम अभ्यास खेल को संग खेल्ने भन्ने एकिन भएको थिएन । अन्तिम समयमा नोयडाको सामान्य टिमसंग अभ्यास खेल्न बाध्य भयो ।
कुनै पनि देशको क्रिकेट टोली अभ्यास खेल होस् या अन्य कुनै खेल जहाँ भम्रणमा जादा पनि पूर्वतयारी हुन्छ । कहा जाने हो? को सँग खेल्ने हो? कस्तो टिम हो? लगायतबारे पूर्वतयारी आवश्यक हुन्छ। तर, टिममै रहेका सदस्यलाई पनि एक दिनपछि हुने खेलका बारेमा समेत जानकारी नहुनुले व्यवस्थापनमा हदैसम्मको कमजोरी स्पष्ट पारेको छ। भम्रणमा गएको नेपाली राष्ट्रिय टिम हो । उनीहरूको आफ्नै प्रतिष्ठा हुन्छ, तर व्यवस्थापकीय कमजोरीले उनीहरूलाई पनि अन्यौलता थपेको देखिन्छ।
आइसीसीले नै अभ्यास खेल मिलाएको बताइएपनि नेपालको ब्यवस्थापकिय कमजोरी प्रष्ट झल्किन्छ । भ्रमणमा जानुअघि नै यो यो टिमसंग खेल्ने भन्ने एकिन हुनुपर्ने बेला टिम भारत पुगेर अभ्यास गरिसक्दापनि को संग अभ्यास खेल खेल्ने भन्ने थाहा नहुनु आफैमा लज्जास्पद कुरा हो, क्रिकेट विकाश गरिरहेका छौ भन्ने हरुका लागि ।
अब सामान्य क्लव टिमसंग अभ्यास खेलेर केन्या जस्तो टिमसंग महत्वपुर्ण खेल खेल्न नेपाललाई कतिको सजिलो होला त्यो खेलपछि नै थाहा होला । तर यो भ्रमणले एउटा कुरा प्रष्ट के पारेको छ भने आइसीसीको मुख ताकेर बसेका नेपाली पदाधिकारीहरु कति सो सस्था प्रति आशावादी छन भनेर ।
खेलाडी भारत जादैछन भनेपनि कुनै एक पदाधिकारी एक साता अगाडी गएर भारतमा अभ्यास खेल्ने टिमको टुङगो लगाउनु पर्ने हो । भलै त्यो आइसीसीसंग समन्वय गरेर किन नहोस । तर टिम दिल्ली लागे राम्रो टिमसंग खेलिन्छ भनेर तर अन्तिममा खिन्न ।
आइसीसीले जिम्मेवारी दिएकी पुर्व सिइओ भावना घिमिरे राजनिती तिर ध्यान दिन थालिन । खासमा यो भ्रमणको समन्वय पनि घिमिरेले नै गर्नुपर्ने थियो। तर हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा